AH: October 2011
ကော်ဖီတစ်ခွက်ဖျော်သည်။ မြည်းကြည့်လိုက်သည်။ သိပ်မကောင်းလှပါ။ သိပ်မကောင်းလှဆိုသည်မှာ စိတ်က ထင်နေတာဖြစ်မည်။ သရီး အင် ၀မ်းအထုတ်ကို ဖန်ခွက်ထဲထည့်ကာ ရေနွေးလောင်းထည့်သည်ကို ကော်ဖီဖျော်သည်ဟု ကျွန်တော်က ခေါ်လိုက်သောကြောင့်ဖြစ်မည်။ မည်သို့ပင် နာမည်တပ်စေကာမူ သောက်နေကျခွက်ကို ရေကလည်း ဒီအနေပဲ ထည့်လိုက်တာ… ဒီအရသာ သာ ထွက်ရမည်။ စိတ်ကြောင့် သာ သိပ်မကောင်းလှဟု ကျွန်တော်ထင်တာဖြစ်မည်။ ကော်ဖီကို တော့ အားနာသည်။ သူ့ရှေ့မှာ သူ့မကောင်းကြောင်းပြောရသဖြင့် အနည်းငယ် ရှက်သလိုလို၊ ဖြစ်သွားသည်။ ဘေးဘီကို ကြည့်လိုက်တော့ ကျွန်တော်တစ်ယောက်ထဲ။
အားနာသော်လည်း မတတ်နိုင် ကော်ဖီခွက်ကို ဘေစင်ထဲသို့ သွန်လိုက်သည်။ စင်ပေါ်တွင် ၀ိုင် လက်ကျန်တစ်လုံးရှိသည်။ ထို့ကြောင့် ၀ိုင် တစ်ခွက် ငှဲ့လိုက်ပြီး အာလူးကြော် အထုပ်သေးတစ်ထုပ်ဖောက်ကာ ၀ရန်တာထွက်လိုက်သည်။ အေးနေသည်၊ လေကလည်း စိမ့်လှသည်။ ထို့ကြောင့် အနွေးထည်ဝတ်လိုက်သည်။ ဆေးလိပ်တစ်လိပ်ကို ဖွာကြည့်သည်။ ဖွာလို့ကောင်းသည်။ လမ်းမီးတို့ လင်းနေပြီ။ နေရောင်ခြည်သုံး လမ်းမီးတို့ဖြစ်သည်။ အိမ်ရှေ့မှ မြင်နေရသည့် ဟောင်းဟို မြစ်ကလေးမှာ မီးတို့ဖြင့်အလှဆင်ထားသည်။ မြစ်ထဲမှ လှေကလေးတွေ ဥဒဟို သွားနေကြသည်။ ဒီလောက် အေးနေတဲ့ အထဲမှာ လှေစီးနိုင်ကြသေးသည်။ ကားများက ဥဒဟို။ မီးပွိုင့်က နီ သွားလိုက်၊ စိမ်းသွားလိုက်၊ ၀ါသွားလိုက်။ ကားတွေကလည်း ရပ်သွားလိုက် ရွှေ့သွားလိုက်။ ၀ိုင်ကို တစ်တို့တို့လိုက်သည်၊ အာလူးကြော်ကို မြှုံ့လိုက်သည်။ ခပ်လှမ်းလှမ်းမှာ ကေတီဗီရှိသည်။
Posted by Aung Htut at 10/31/2011 11:02:00 PM6comments
ထပ်ခါ ထပ်ခါ အသက်သွင်းနေတယ်
Posted by Aung Htut at 10/31/2011 07:00:00 PM4comments
Posted by Aung Htut at 10/30/2011 10:56:00 PM4comments
စလုံးက DeF!ND ကိုထွင်သောကြောင့် Siri က Singlish ကို နားလည်တော့မည်
Apple 4S ရဲ့ လူစိတ်ဝင်စားမှု့အများဆုံး Feature ကတော့ Siri ဆိုတဲ့ မိမိ ဖုန်းနားကပ်ပြီးပြောသမျှကို လုပ်ဆောင်ပေးတဲ့ ဆောဖ်ဝဲလေးပါ။ ဒါပေမယ့် ခက်နေတာက ဘိုသံပေါက်မှ နားလည်လေတော့ အာရှတိုက်က လူတွေ အတွက်က ဖုန်းအသစ်ကြီးဝယ် ကိုယ်ပြောတာ သူနားမလည်၊ နားမလည်တော့ ထီး ဆို ဖိနပ် ကြားပြီး လုပ်ချင်တာတွေကို Siri ကလျှောက်လုပ်တော့ ဖုန်းအသစ်ကြီးကိုင်ပြီး ဒုက္ခနဲ့ လှလှ ကိုတွေ့နေကြရပါတယ်။ ဂျပန်မှာလည်း ဒီလိုမျိုး တွေဖြစ်နေတာကို YouTube မှာတွေ့ကြရမှာပါ။
ဒါကြောင့် အခု Singapore Telecom (Singtel)က DeF!ND ဆိုတဲ့ app တစ်ခုကို တီထွင် လိုက်ပါပြီတဲ့။ အဲ့ဒီ app က စလုံးတွေပြောပြောနေတဲ့ Singlish လေးယူလေသိမ်းကို နားလည်နိုင်ပါတယ်တဲ့။ ဒါကြောင့် Siri လိုမျိုး ဖုန်း နဲ့ အလုပ်ရှုပ်လို့ရတဲ့ နေရာတွေမှတော့ စလုံးကလူတွေ ရထားပေါ်မှာ၊ ဘက်စ်ကားပေါ်မှာ တစ်ယောက်ထဲ တစ်တွတ်တွတ် ပြောလို့ အဆင်ပြေတော့မယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ ကြာသာပတေးနေ့ ညသန်းခေါင်မှာ အများသုံးလို့ရအောင် အိုင်ဖုန်း 4S ရောင်းချိန်အခိုက် ခါတော်မီ သုံးလို့ရပါပြီလို့ Singtel ရဲ့ Chief Executive အလန် လျူး က အကြံပေးပါသတဲ့။
Posted by Aung Htut at 10/29/2011 01:01:00 PM 8 comments
Posted by Aung Htut at 10/28/2011 11:00:00 PM5comments
အကြောင်းကြောင်းကြောင့် စိတ်ရှုပ်နေရင် ဦးနှောက်ဆေးဖို့ပေါ့ ၁
ဖဲ အန် လက်ဗလီး ကို လိမ်းကြည့်ပါ အိုဘားမားကြီးတောင် ထိုင်ငိုသွားမယ်... :)
Posted by Aung Htut at 10/28/2011 02:08:00 PM9comments
အီလန်နာ ရာဟဗ်(Ilana Yahav) ရဲ့ သဲပန်းချီ အချို့ကို ကြိုက်လို့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ် ခင်ဗျာ။ လူတွေရဲ့ ခံစားချက်ကို အချိန်လေး အနည်းငယ်အတွင်းမှာ ပြောင်းလဲသွားအောင် စွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့ အနုပညာရှင်တွေရဲ့ ဖန်တီးမှု့ဟာ လေးစားဖွယ်ကောင်းလှပါတယ်။ စိတ်ဝင်းစားသူများ ဆက်လက်ကြည့်ရှု့ကြပါခင်ဗျာ။
Posted by Aung Htut at 10/27/2011 11:04:00 PM4comments
Posted by Aung Htut at 10/25/2011 10:03:00 PM4comments
ငပိရေနဲ့ တို့စရာ၊ မက်ဒေါနယ် နဲ့ ကေအဖ်စီ
၃ နှစ် ၃မိုးလေ့လာချစ်ကြိုက်မှု့
Living Together ယဉ်ကျေးမှု့…
ဂျိုးသိန်းဆေးလိပ် နဲ့ Marlboro
အတွေးအခေါ်ကျတော့ အဟက် ဒုံရင်းက ဒုံရင်း
အရေခွံကို ကြည့်ယုံနဲ့တော့ အနှစ်သာရ က ရလာမှာလား
ဒီမို ဒီမို လူတိုင်း ဒီမို …. အားလုံးကဒီမို
ကြက်ဥကို အစရှာနေသလို ငါဟာပျောက်ဆုံးနေတယ်….
အသွေးတွေ အသားတွေကို ပြောင်းလဲမှု့တွေက
တစ်နေ့ ၈ နာရီ အလုပ်လုပ်ပေမယ့်…. ငါ ပရောဖက်ရှင်နယ်ဖြစ်ရဲ့လား
ရှက်တဲ့စိတ်က ဦးနှောက်ကို ခွာချနေတယ်…
မိတ်ကပ်တွေ လိမ်းပြီးတော့ လူတွေက ပြုံးပြနေတယ်
Posted by Aung Htut at 10/25/2011 04:34:00 PM6comments
Posted by Aung Htut at 10/24/2011 10:17:00 PM 14 comments
ကျွန်တော် အခွင့်ကြုံရင် သွားချင်တဲ့ နေရာတစ်ခုပါ။ Borobudur အင်ဒိုနီးရှားအခေါ် ဘောရောဘုဒေါ လို့ခေါ်တဲ့ ကမ္ဘာ့အံဖွယ်နေရာ တွေထဲက တစ်ခုအပါအ၀င်ဖြစ်တဲ့ ဗုဒ္ဓစေတီတော်ကြီးဆီကိုပါ။ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ ဂျာဗားကျွန်းပေါ်မှာ တည်ရှိပါတယ်။ ကျွန်တော် ဒီနေ့မနက် ဘောရောဘုဒေါ အကြောင်းကို အလုပ်အတူလုပ်နေတဲ့ အင်ဒိုနီးရှား လူမျိုး Chief Enginner နဲ့ စကားစမြည်ပြောရင်း မေးဖြစ်ပါတယ်။ သွားသင့်တဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်ပြီး အံသြဖွယ်ရာတွေနဲ့ ပြည့်နှက်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ အဲ့ဒီဒေသမှာ အင်ဒိုနီးရှား နိုင်ငံဘာသာစကားဖြစ်တဲ့ ဘဟာစာ စကားကို မပြောကြပဲ သူတို့ ကျွန်းစကား ဂျာဗား ဘာသာနဲ့ ပြောဆိုကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ အဲ့ဒီကို ရောက်ရင် မျက်စေ့မှိတ်ပြီးတော့ လက်နဲ့ စေတီတော်ကို ထိပြီး လမ်းလျှောက်ပါတဲ့ အဲဒီအချိန်မှာ အခြားတစ်ဘက်က မိန်းကလေးကလည်း အဲ့ဒီလို မျက်စေ့မှိတ်ပြီးတော့ လမ်းလျှောက်ရင်း လက်နှစ်ခု ထိမိရင် ဒါဟာ ဖူးစာရှင်ဖြစ်ပြီး အိမ်ထောင်ပြုကြတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ကျွန်တော်ရောက်ရင်တော့ ဒီလို လုပ်လို့မဖြစ်ပါဘူး။ အိမ်က ရှု့မငြီးက ဓားနဲ့ လိုက်ခုတ်မယ်နဲ့ တူတယ်။ ဘောရောဘုဒေါ စေတီတော်ကြီးရဲ့ အနီးအနားမှာလည်း များစွာသော ဘုရား ပုထိုးတွေ ရှိနေပါသေးတယ်တဲ့။ ဥပမာ မန်ဒတ်တို့ ပ၀မ်တို့ ဒေသတွေမှာပါ။ တစ်ချိန်က ဗုဒ္ဓ ဘာသာထွန်းကားခဲ့တဲ့ ကျွန်းကြီး တစ်ကျွန်း ဖြစ်ပါတယ်။
Posted by Aung Htut at 10/24/2011 01:17:00 PM 8 comments
ကိုလံဘီယာနိုင်ငံမှာတော့ ကမ္ဘာ့အံဖွယ် အဆောက်အဦးတွေကို သဲ၊ရေ စသည့်ပစ္စည်းများကိုသာ အသုံးပြုပြီး ပြန်လည်တည်ဆောက်ပြသခဲ့ပါတယ်။ ဒီအဆောက်အဦးတွေထဲမှာ အီဖဲမျှော်စင်၊ အီဂျစ်ပြည် ဂီဇာမှာရှိတဲ့ ပစ်ရမစ်ကြီး စည်အားဖြင့် အစုံပါဝင်ပါတယ်။
ဒီလို ကမ္ဘာ့ အံဖွယ် အဆောက်အဦးတွေကို ပြန်လည်တည်ဆောက်တဲ့ အခါမှာ ကော်လုံဝမသုံးဘဲ သဲနှင့် ရေ နှစ်မျိုးကိုသာ အသုံပြုပြီး တည်ဆောက်ခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒီလိုအဆောက်အဦးတွေဆောက်လုပ်ဖို့အတွက် ကိုလံဘီယာနိုင်ငံရဲ့ ဖြစ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ ဆန်းမားပက်ဇ်မြစ်ကနေပြီး သဲတန်ချိန်ပေါင်း ၆၀၀၀ ကျော်သယ်ဆောင်ခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ အဆိုပါ အဆောက်အဦးတွေကို ဖန်တီးတဲ့ ကုမ္ပဏီကတော့ ဖိုတို အာဘန်နိုလို့ခေါ်ခဲ့ ကုမ္ပဏီက တာဝန်ယူတည်ဆောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါသတဲ့။ ဒီ ဆောက်လုပ်ထားတဲ့ သဲအဆောက်အဦးတွေကိုတော့ ၂၀၁၂ ခုနှစ် မတ်လ ၄ ရက်နေ့အထိ ပြသထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ အောက်က YouTube ဗီဒီယို လေးမှာ တည်ဆောက်ထားတဲ့ အဆောက်အဦးတွေကို ရှု့စားနိုင်ကြပါပြီ။
Posted by Aung Htut at 10/23/2011 10:13:00 PM4comments
Posted by Aung Htut at 10/22/2011 10:21:00 PM2comments
Posted by Aung Htut at 10/22/2011 11:54:00 AM0comments
အမေရိကန်နိုင်ငံက “Mallie’s Sport Grill & Bar” ဆိုတဲ့ စားသောက်ဆိုင်ဟာ ဟမ်ဘာကာ အကြီးကြီးတွေ ရောင်းတာနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး နာမည်ကြီးပါတယ်။ အခုလည်း ဒီထရွိက်သတင်းဋ္ဌာနကနေပြီးတော့ ဒီ Millie’s Sports Grill & Grill စားသောက်ဆိုင်မှ ၃၃၈ ပေါင် အလေးချိန်ရှိတဲ့ ဟမ်ဘာကာ ကြီးကို မှာယူစားသောက်နိုင်ပြီဖြစ်ပါသတဲ့။ လူတွေအများကြီး ကတော့ ဒီ ဒေါ်လာ ၂၀၀၀ တန် ဟမ်ဘာကာကြီးကို လာကြည့်ပြီး သွားရည်ယိုနေကြပါသတဲ့။
ဒီဟမ်ဘာကာကြီးမှာ ကယ်လိုရီ ၅သိန်း ၄ သောင်းလောက်ပါဝင်ပြီး ၂၂ နာရီကြာအောင် အချိန်ယူရပါတယ်။ ဆိုင်ရဲ့ မန်နေဂျာ ဂျက်ဆင်ဂျုန်း ရဲ့အဆိုအရ ဒီဘာကာမှာ ဆလပ်ရွက် ၁၅ ပေါင်၊ ၀က်သားကျပ်တင်(bacon) ပေါင် ၃၀၊ ခရမ်းချဉ်သီး ပေါင် ၃၀၊ ချိစ့် ၃၆ပေါင် ပါဝင်ပြီး အားလူးချောင်းကြော်နဲ့ သောက်စရာ အရည်တစ်မျိုးမျိုးနဲ့ တွဲဖက်စားသောက်နိုင်ပါသတဲ့။
Posted by Aung Htut at 10/22/2011 10:04:00 AM2comments
ရက်အနည်းငယ်အတွင်းမှာ အသက် ၅၀ စာအိုမင်းသွားတဲ့ ဗီယက်နမ်က အမျိုးသမီး
ဗီယက်နမ်နိုင်ငံက ငုယင်သီပေါင် ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးလေးဟာ ရက်အနည်းငယ်အတွင်းမှာဘဲ အသက် ၂၃ နှစ်အရွယ်ကနေ သက် ၇၃ နှစ်အရွယ်လောက်ထင်ရအောင်ကို အိုမင်းသွားခဲ့ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ သူမဟာ ပင်လယ်စာ တွေကနေ အဆိပ်သင့်သွားလို့ ဖြစ်ပါသတဲ့။ ယခု အသက် ၂၆ နှစ်ရှိပြီးဖြစ်တဲ့ အဆိုပါမိန်းမငယ်လေးဟာ ၂၀၀၈ ခုနှစ်ထဲက ဒီလို ပင်လယ်စာ အဆိပ်သင့်လို့ သူမ အသားတွေဟာ ရှုံတွလာခဲ့တာကို သိရှိခဲ့ပေမယ့် ဆင်းရဲလွန်းလို့ ဆေးမကုနိုင်ခဲ့ပါဘူးတဲ့။ ဒီလထဲမှာတော့ ဗီယက်နမ်က ဆရာဝန်တွေက သူမရဲ့ ဆေးဖိုးဝါးခ မည်မျှလောက်ကျနိုင်သလဲဆိုတာကို တွက်ချက်ကြည့်မယ်လို့ ဆိုပါသတဲ့။
သူမရဲ့ ခင်ပွန်းသည် လက်သမားဆရာလေး သန်းတူရန် ကတော့ သူတို့ဟာ အချစ်စစ်အချစ်မှန်နဲ့ ချစ်ကြတာဖြစ်ပြီး တစ်ချိန်က လှပခဲ့တဲ့ သူ့ရဲ့ ချစ်ဇနီးကို ဆက်လက် ချစ်မြဲချစ်နေဦးမယ်လို့ ဆိုပါသတဲ့။ သူမဟာ အပြင်ကို ထွက်ရင် အမြဲတမ်း မျက်နှာကို ဖုံးအုပ်ပြီး လူတကာရဲ့ အကြည့်တွေကို မခံရအောင် သွားလာရပါသတဲ့။ ဓာတ်ပုံလေးထဲမှာတွေ့ရမှာကတော့ သူမရဲ့ ၂၀၀၆ ခုနှစ် မင်္ဂလာဆောင်တုန်းက ပုံလေးပါ။ ငါးနှစ်အကြာမှာတော့ ခုလို အသက် ၇၃ နှစ်အရွယ်လို့ ထင်ရလောက်အောင်ကို အိုမင်းသွားခဲ့ပါတယ်။ သူမကတော့ သူမဟာ ဓာတ်မတဲ့တဲ့ရောဂါကို တစ်သက်လုံးခံစားသွားရမယ်လို့ ယုံကြည့်နေပါသတဲ့။ ၂၀၀၈ ခုနှစ်တုန်းက သူမဟာ ဒီ ပင်လယ်စာ ဓာတ်မတဲ့မှု့ ရောဂါကိုဆိုးရွားစွာခံစားခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ တစ်ကိုယ်လုံး အလွန်ယားယံခဲ့ရပြီး အိပ်ပျော်နေရင်းနဲ့တောင်မှ ယားလွန်းလို့ ကုတ်နေရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
သူမဟာ အဲ့ဒီအချိန်တုန်းက ဆေးရုံးကို သွားရမယ့်အစား နီစပ်ရာ ဆေးမြီးတိုလေးတွေနဲ့သာ ကုသခဲ့ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ သူမရဲ့ယောင်္ကျားဖြစ်သူဟာလည်း အလွန်မှ ဆင်းရဲလွန်းလို့ ဆေးရုံကို သွားပြီး ကုသဖို့ မတတ်နိုင်လို့ပါတဲ့။ မိန်းကလေးငယ် “ပေါင်” ရဲ့ အဆိုအရ သူမဟာဒီဆေးတွေကို သောက်ပြီး တစ်လလောက်အကြာမှာ ယားယံတာတွေက သက်သာလာခဲ့ပေမယ့် အရေပြားပေါ်မှာ အဖုအပိန့်တွေ ကျန်ရစ်နေပါတယ်တဲ့။ ဒါနဲ့ပဲ သူမဟာ နောက်ထပ် ဆေးမြီးတို တစ်မျိုးကိုပြောင်းသုံးတဲ့အခါမှာတော့ ယားတာရော အဖုအပိန့်တွေပါ ပျောက်သွားပေမယ့် သူမရဲ့ အရေပြားတွေကတော့ ပါးရည်တွန့်လာပါတယ်တဲ့။
Posted by Aung Htut at 10/21/2011 11:14:00 PM4comments
ယခု Apple က အသစ်ထုတ်လိုက်တဲ့ iPhone 4S မှာ ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ထည့်သွင်းထားတဲ့ တယ်လီဖုန်းနံပါတ်ကနေတစ်ဆင့် တည်နေရာကို ရှာဖွေပေးတဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲအကူအညီနဲ့ နယူးယောက်မြို့က ယောင်္ကျားဟာ သူ့မိန်းမ နောက်မိလင်းတာကို ဖမ်းနိုင်ခဲ့ပါသတဲ့။
“သူငယ်ချင်းများကို ရှာဖွေကြစို့ (Find My Friends)”လို့ခေါ်တဲ့ iPhone 4S ရဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲအကူအညီနဲ့ သူမိန်းမတည်ရှိနေတဲ့ နေရာကို သူ့မိန်းမ သူငယ်ချင်းက လိမ်ညာထားစေကာမူ ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ သောမက်စ် မိန့်ဇ် က MacRumors.com မှာ ရေးသွားပါတယ်။
“ကျွန်တော် ကျွန်တော့်မိန်းမရဲ့ ဖုန်းနံပါတ်ကို သူမ မသိအောင် ဒီဆော့ဖ်ဝဲထဲကို ထည့်ထားပါတယ်။ အဲ့ဒီနေ့က ကျွန်တော်မေးတော့ သူမက သူမရဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ အိမ်ရှိရာ East Village မှာလို့ ကျွန်တော့်ကိုပြောပါတယ်။ ကျွန်တော် အဲ့ဒီမှာ တင်သံသယရှိလာပြီး ဒီမူမှန်တဲ့ အပြုအမူဖြစ်တဲ့ ထိုလူနဲ့ အဲ့ဒီနေရာမှာ အစည်းအဝေးလုပ်နေတယ်ဆိုတာကို ယုံကို မယုံတာပါ။ အဲ့ဒါနဲ့ Find my friends ဆော့ဖ်ဝဲနဲ့ ကြည့်လိုက်တော့ East village မှာ သူမ မရှိပါဘူး” လို့ အဆိုပါ ၀ဘ်ဆိုဒ်ပေါ်မှာ ရေးသွားပါတယ်။
Posted by Aung Htut at 10/21/2011 12:33:00 PM 10 comments
Posted by Aung Htut at 10/20/2011 07:59:00 PM5comments
ပြည်ထောင်စုကို.............. သြော်.. ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ ပြည်ထောင်စုကို..... အသက်ပေးလို့ဖြင့် ကာကွယ်မယ့်သူလေးတွေ.....
Posted by Aung Htut at 10/20/2011 02:39:00 PM6comments
စတိဗ်ဂျော့ကြီး ငုတ်တုတ်ထထိုင်သွားမယ်... ဘာမှတ်နေလဲ ဟဲ ဟဲ ဟဲ
Posted by Aung Htut at 10/19/2011 11:06:00 PM6comments
ဘွေသာဟန်း...... ကားနီနား..... ဟောင်ရှ.... သွပ်သွပ်သွပ်....
Posted by Aung Htut at 10/19/2011 01:27:00 AM6comments
ဒီ ဗီဒီယိုလေးကတော့ တရုတ်နိုင်ငံမှာ ဖြစ်သွားတဲ့ ဖြစ်ရပ်ကလေးပါ။ ကလေးငယ်တစ်ယောက်ကို ထရပ်ကား တစ်စီးကတိုက်၊ နောက်ထပ် ထရပ်ကားတစ်စီးက ထပ်ကြိတ်သွားပါတယ်။ ဖြတ်သွားဖြတ်လာလုပ်သွားတဲ့ လူပေါင်း ၁၈ ယောက်လောက်က မည်သို့မှ မဖြစ်သလို ဒီတိုင်းကို ဖြတ်သွားကြပါတယ်။ နောက်ဆုံး ကျမှ ဆေးရုံရောက်ပြီး အဖေ၊ အမေ တွေ သိသွားတဲ့ အဖြစ်ကလေးပါ။ နှလုံးရောဂါရှိသူများ မကြည့်ကြဖို့ ပြောလိုပါတယ်။
ဒါကို ကြည့်ပြီးတော့ နိုင်ငံတစ်ခု တိုးတက်တယ်ဆိုတာ ဘာကိုကြည့်ပြီး တိုးတက်တယ်လို့ ဆိုလိုတာလည်း ဆိုတဲ့ အတွေးလေးပေါ်လာပါတယ်။
Posted by Aung Htut at 10/18/2011 09:53:00 AM6comments
ထိုင်းနိုင်ငံ အယုဒ္ဓယမှာတော့ မိကျောင်းမွေးမြူရေးကန်တွေကနေ မိကျောင်း အကောင် ၁၀၀ ရောက်လွတ်သွားလို့ အရှင်တစ်ကောင်ဖမ်းပေးနိုင်ရင် ဘတ် ၁၀၀၀ နဲ့ လဲပေးနေပါပြီလို့ ထိုင်းကျန်းမာရေးဝန်ကြီး ကပြောကြားသွားပါတယ်။ “လူတွေ အန္တရာယ်မရှိအောင် ဒီမိကျောင်းတွေကို ဖမ်းပြီး ထိန်းသိမ်းဖို့လိုနေပါတယ်လို့” ကျန်းမာရေးဝန်ကြီး ပစ်တရား ဘောရန်နာစီရီ AFP ကိုပြောကြားသွားပါတယ်။
ရာစုနှစ်ရဲ့ အကြီးမားဆုံး ရေကြီးမှု့ကြောင့် ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ နိုင်ငံခြားသားတွေကို ဆွဲဆောင်ရာ အယုဒ္ဓယမြို့အနီအနားမှာ ဒီမိကျောင်းတွေ လွတ်နေတာပါ။ ဒါအပြင် ဒီရေကြီးမှု့ကြောင့် အိုးအိမ်တွေ၊ စီးပွားရေးအဆောက်အဦးတွေ၊ စက်ရုံအလုပ်ရုံတွေ ရေလွှမ်းမိုးမှု့ခံနေရပြီး လူထောင်ပေါင်းများစွာလည်း ဒုက္ခသည်တွေ ဖြစ်နေကြပါတယ်။ လူ ၃၀၀ လောက် အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီး ဒီအထဲမှာ သဘာဝ တိရိစ္ဆာန်ရိုင်းတွေကြောင့် ဘယ်နှစ်ယောက်သေကျေခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတော့ ဘယ်သူမှ မသိပါဘူး။
Posted by Aung Htut at 10/17/2011 10:41:00 PM4comments
Source : (YouTube)
Posted by Aung Htut at 10/17/2011 01:12:00 PM5comments
Song Bon Choi သို့ Korea's Got Talent ရဲ့ထူးချွန်သူ လူငယ်လေး
ကြည့်ရင်း ကြည့်ရင်းနဲ့ ချီးကျူးမိသလို သူ့ဘ၀ကိုလည်း စာနာမိပါတယ်။ ဆောင်ဘွန်ချွိုင်းဟာ Korea's Got Talent အစီအစဉ်မှာ ပါဝင်ဖျော်ဖြေခဲ့သူပါ။ အသက်သုံးနှစ်အရွယ်မှာ မိဘနှစ်ပါးရဲ့ အစွန်ပစ် ခံခဲရပြီး အသက်ငါးနှစ်မှာ လမ်းပေါ်မှာကြီးပြင်ခဲ့ရပါတယ်။ ပီကေလေးတွေ၊ အာဖြည့်အချိုရေလေးတွေကို လမ်းပေါ်မှာ၊ နိုက်လပ်တွေမှာ ရောင်းရင်း အသက်မွေးခဲ့ရတာ အသက် ၁၀ နှစ်အရွယ်ထဲကနေ ခုထိဖြစ်ပါတယ်။ သူမှာ နားခိုစရာ အိမ်ရယ်လို့ မရှိပဲ အိမ်သာတွေထဲမှာ၊ လှေကားထစ်တွေဟာတော့ သူ့ရဲ့ မှေးစက်ရာ နေရာလေးတွေ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မူလတန်းနဲ့ အလယ်တန်းတော့ ပြီးအောင်တက်နိုင်ခဲ့ပြီး အထက်တန်းဟာတော့ သူနောက်ဆုံး ရောက်ခဲဖူးတဲ့ ပညာသင် ဘ၀ဖြစ်ပါတယ်တဲ့။
Posted by Aung Htut at 10/15/2011 09:24:00 PM5comments
တစ်ခါတုန်းက အလွန်သန်မာတဲ့ သစ်ခုတ်သမားကြီး တစ်ယောက်ရှိပါသတဲ့။ တစ်နေ့တော့ သစ်ခုတ်သမားကြီးဟာ သစ်ကုန်သည်တစ်ယောက်ဆီမှာ အလုပ်သွားလျှောက်ပြီး အလုပ်ရသွားပါသတဲ့။ သူရဲ့လစာဟာ အလွန်ကောင်းသလို အလုပ်ခွင်အခြေအနေကလည်း အလွန်ကောင်းပါသတဲ့။ ဒါကြောင့်နဲ့ဘဲ သစ်ခုတ်သမားဟာ သူအလုပ်ကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်မယ်လို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါသတဲ့။
သူရဲ့ သဋ္ဌေးဟာ သစ်ခုတ်သမားကြီးကို ပေါက်ဆိန်တစ်လက်ပေးပြီးတော့ သစ်ခုတ်ရမယ့် နေရာကို လိုက်လံပြသပေးပါသတဲ့။
ဒီလိုနဲ့ ပထမနေ့မှာတော့ သစ်ခုတ်သမားဟာ သစ်ပင် ၁၅ ပင် ခုတ်လှဲနိုင်ပါသတဲ့”
“ဂုဏ်ယူပါတယ်ကွာ ဒီအတိုင်းတာ ဆက်ပြီး အလုပ်လုပ်” လို့ သဋ္ဌေးကြီးက သစ်ခုတ်သမားကို ပြောပါတယ်။
သဋ္ဌေး ရဲ့ချီကျူးခံရတာကြောင့် သစ်ခုတ်သမားကြီးလည်း စိတ်အားအလွန်တက်ကြွသွားပြီး နောက်တစ်နေ့မှာ ဒီထက်ပိုပြီး ကြိုးကြိုးစားစားနဲ့ သစ်ပင်တွေကို ခုတ်ပါသတဲ့။ ဒါပေမယ့် ၁၀ ပင်သာပြီးအောင်ခုတ်လှဲနိုင်ပါတယ်။ တတိယမြောက်နေ့မှာလည်း ပိုပြီးကြိုးစားပေမယ့် သစ်ပင် ၇ ပင်သာခုတ်လှဲနိုင်ပါသတဲ့။ ဒီလိုနဲ့ နေ့တွေနေ့တွေကြာလာလိုက်တာ သစ်ပင်ခုတ်နိုင်တဲ့ အရည်အတွက်လည်း နဲသထက်နဲနဲ လာပါတယ်။
သစ်ခုတ်သမားကြီးဟာ သူ့ရဲ့ ခွန်အားတွေ ယုတ်လျော့ ကျဆင်းလာတယ်လို့ တွေးမိပါသတဲ့။ ဒါနဲ့ဘဲ သူ့ရဲ့ သဋ္ဌေးဆီကိုသွားပြီးတော့ တောင်းပန်ပါတယ် နောက်ပြီးတော့ ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုဖြစ်ရတယ်ဆိုတာကို တွေးလို့မရဘူးလို့ ပြောပါသတဲ့။
Posted by Aung Htut at 10/14/2011 05:19:00 PM 8 comments
Posted by Aung Htut at 10/14/2011 04:53:00 PM2comments
စားကြဦးမလား အိုဘားမား ကြက်ကြော် (OFC - Obama Fried Chicken)
ဘေဂျင်းက အိုဘားမားကြက်ကြော်ဆိုင် "OFC" ပါတဲ့။ KFC နဲ့ မတူ တစ်မူထူးခြားတဲ့ နာမည်နဲ့ကို ဖွင့်လှစ်လိုက်တာပါ။ ဟိုက သမ္မတကြီးတော့ လျှာတွေဘာတွေ ကိုက်မိသွားနိုင်ပါတယ်။ ဒါတင်ဘာဟုတ်သေးလည်း KFC ကိုယ်တိုင်တောင် အိုဘားမားပုံစံနဲ့ သူ့ KFC ကို ဟောင်ကောင်မှာ ကြော်ငြာသေးတာ Obama Fried Chicken (OFC) ပေါ်လာတာ အဆန်းမဟုတ်ပါဘူးနော့်။ ကဲ ရွှေပြည်ကြီးမှာ ဖွင့်ချင်တဲ့လူများရှိရင်လည်း အိုဘားမားကြက်ကြော်ဆိုင် ဖွင့်သာရောင်းကြပါတော့ ခင်ဗျား။ အောက်ကလင့်ကတော့ KFC ရဲ့ အိုဘားမား ဟမ်ဘာကာ ကြော်ငြာလေးပါ။
Posted by Aung Htut at 10/13/2011 05:23:00 PM9comments
သီတင်းကျွတ်ပြီဆိုရင် ငယ်ဘ၀လေးကို ပြန်ပြန်သတိရမိပါတယ်။ ကျွန်တော်က ပုသိမ်မြို့မှာမွေး ပုသိမ်မှာကြီး ပုသိမ်မှာ ၁၀ တန်းအောင်တာခင်ဗျ။ ကျွန်တော်တို့ ရပ်ကွက်ထဲမှာ ကလေးချစ်တဲ့ သွားဆရာဝန်ကြီးရှိတယ်။ သူ့မှာက သားတစ်ယောက်၊ သမီးတစ်ယောက်။ သားက ကျွန်တော်နဲ့ အသက်တူ အတန်းတူ၊ အထက်တန်းကျတော့ ကျောင်းတူ။ သမီးက ကျွန်တော်တို့ထက် ၂နှစ်ငယ်။ နောက် ရပ်ကွက်ထဲက ကလေးပေါင်း တစ်သိုက်နဲ့ ညညဆိုရင် ကလေး ၁၀ ယောက်ထက် မလျှော့ဘူး ဆရာဝန်ကြီးအိမ်မှာ ကလေးတွေအသံနဲ့ ဆူညံလို့။ သီတင်းကျွတ်ဆို သာတောင်ဆိုးသေး။ ကျွန်တော်တို့ တစ်တွေ ဖယောင်းတိုင်ရယ် ကျားဘမ်းဘူး ခွံလေးတွေရယ် ရေပုံးရယ်ရရင် အလုပ်က ဖြစ်နေပြီ။ ငရဲမီး ဆော့သကိုး။ မြေကြီးမှာ ကျွင်းတူး၊ ဖယောင်းတိုင် ငုတ်တိုကလေးထည့် ကျားဘန်းဘူး ထဲ ဖယောင်းလေးတွေ ခြစ်ထဲ့၊ ဆူအောင်ထား ဆူပြီဆိုရင် မီးစာလေးနဲနဲကျွေး မီးလေးနည်းနည်းတောက်တာနဲ့ ရေနဲ့လောင်း ရှဲခနဲ မီးတွေထတောက် ဒါကိုဘဲပျော်။ ဗျောက်အိုး၊ ရမ်းသေနတ်၊ ရွှီဒိုင်း ဒါတွေက ရပ်ကွက်တကာလှည့် လူကြီးတွေကို လိုက်ကန်တော့ ရလာတဲ့ မုန်းဖိုးနဲ့ ဘောင်းဘီအိတ်ထဲနဲ့ လွယ်အိတ်ထဲ သီတင်းကျွတ်ချိန်ဆို အပြည့်။ တစ်ညလုံးဆော့ မျောက်ရှုံးအောင်ဆော့၊ ဗိုက်ဆာလာရင် ဆရာဝန်ကြီးကျွေးတဲ့ ဆီထမင်းဖြစ်ဖြစ်၊ အို ဘာမုန့်ဖြစ်ဖြစ် စုံအောင်စား။ စားလို့ဝရင်ပြန်ဆော့ တယ်ပျော်စရာကောင်းတဲ့ ကလေးဘ၀လေးပါဘဲ။
Posted by Aung Htut at 10/12/2011 09:43:00 PM 10 comments
The Queen's Diamond Jubilee (2012)
ဒီနှစ်အတွက် အသစ်ထွက်ရှိလာတဲ့ ရွှေဒင်္ဂါးပြားဖြစ်ပါတယ်။ ရွှေဒင်္ဂါးဟာ ရွှေအစစ် ၉၉.၉၉၉% ပါဝင်ပါတယ်။ တစ်ကမ္ဘာလုံးအတွက် ရွှေဒင်္ဂါး ၁၅၀၀ပဲ ထုတ်လုပ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ မျက်နှာပြင် ၂ ဘက်ပါရှိပါတယ်။ ဒင်္ဂါးပေါ်မှာ ၀.၁၁ မှ ၀.၁၄ ကာရက်အတွင်းရှိတဲ့ စိန်တစ်လုံးကို မြှုပ်နှံထားပါတယ်။
ဒီရွှေဒင်္ဂါးကိုတော့ ဘုရင်မကြီးရဲ့ စိန်ရတု အထိန်းအမှတ် ပါရှိတဲ့ လှပတဲ့ သစ်သား သတ္တာလေးနဲ့ ထည့်ပေးထားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီရွှေဒင်္ဂါးဟာ အင်္ဂလန်နိုင်ငံ အယ်လိစဘက် ၂ ဘုရင်မကြီးရဲ့ အသက် ၆၀ ပြည့်အထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့ ထုတ်ဝေတာဖြစ်ပြီး ဒင်္ဂါးမှာတော့ အယ်လိစဘက် ဘုရင်မ နုပျိုစဉ်က ပုံကို ဖော်ပြထားပါတယ်။ ဒါကို ဒီဇိုင်နာ လော်ရီ မက်ဂေါက ဒီဇိုင်းရေးဆွဲပေးတာပါ။ ဒီ ဒင်္ဂါးကို ကနေဒါ ဒေါ်လာ ၂၀၀၀ လောက်နဲ့ မှာယူလို့ရပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
Posted by Aung Htut at 10/12/2011 01:12:00 PM5comments
Posted by Aung Htut at 10/11/2011 10:22:00 PM3comments
Posted by Aung Htut at 10/11/2011 11:59:00 AM6comments
ဒီတစ်ခါတော့ အမေရိကန် ဒေါ်လာ ဘယ်လောက်တန်အထိ မြင်ဖူးလဲ? မဟုတ်ပါဘူး။ ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ အလှဆုံး ပိုက်ဆံလေးတွေကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
A Costa Rican banknote for five colones. It shows Rafael Yglesia Castro, president of Costa Rica from 1894 to 1902 andaGuaria Morada orchid, Costa Rica's national flower. The current series of banknotes is being replaced throughout 2010.
ကော်စတာရီကာ နိုင်ငံရဲ့ ငါးကျပ် တန်ပိုက်ဆံပါ။ ၁၈၉၄ မှ ၁၉၀၂ အတွင်း ကော်စတာရီကာရဲ့ သမ္မတ ရာဖေး ရက်လီရှား ကက်စရို ရဲ့ ပုံနဲ့ ဂွာရီယာ မိုရာဒါ သစ်ခွပန်း(ကော်စတာရီကာရဲ့ နိုင်ငံကိုယ်စားပြု ပန်း)ကိုဖော်ပြထားပါတယ်။ ဒီပိုက်ဆံတွေကိုတော့ ၂၀၁၀မှာ အသစ်လဲလှယ်သုံးစွဲကြပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
Posted by Aung Htut at 10/10/2011 11:21:00 PM9comments
ပြီခဲ့တဲ့ အောက်တိုဘာ ၈ ရက် ၂၀၁၁ တုန်းက ဖွင့်လှစ်ခဲ့တဲ့ တရုတ်ပြည် ကျန်းစုပြည်နယ်က ဟွာရှီးရွာကလေးရဲ့ ဟိုတယ်အသစ်ပါ။ ဒီဟိုတယ်ကိုတည်ဆောက်စရိတ်စုစုပေါင်းဟာ တရုတ်ယွမ်ငွေ ၃ ဘီလီယံ (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၄၇၁ သန်း) ကုန်ကျပါတယ်။ ဒါကို တည်ဆောက်ဖို့ ရွာမှာရှိတဲ့ အိမ်ထောင်စုတစ်ခုစီကနေ တစ်ရုတ်ငွေ ၁၀ သန်း ခွဲဝေကုန်ကျခံပြီး တည်ဆောက်ခဲ့တာပါ။
ဒီရွာသားတွေဟာ တစ်ယောက်ချင်းစီကိုပဲ ယူရိုငွေ ၁ သိန်းလောက် အနည်းဆုံး ချမ်းသာကြတယ်လို့အစိုးရအဖွဲအစည်းရဲ့ စာရင်းကဆိုပါတယ်။ ဒီရွာကလေးရဲ့ အထွေထွေ ကုမ္ပဏီဟာ စတော့ အိတ်ချိန်းမှာ စာရင်းဝင်ဖြစ်ပြီး လယ်သမားတွေဟာလည်း ဒါကြောင့် ချမ်းသာလာခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီကုမ္ပဏီဟာ လေယဉ်တွေကိုလည်း ၀ယ်ယူထားပြီး သင်္ဘောတွေကိုလည်း ၀ယ်ယူဖို့ ရှိပါတယ်။ ဒီကုမ္ပဏီကို ပိုင်ဆိုင်သူတွေက ရွာသူရွာသားတွေဖြစ်ပြီး တစ်နှစ်တာ အမြတ်ငွေရဲ့ ငါးပုံတစ်ပုံကို ဝေစုပြန်ခွဲပေးလေ့ရှိပါတယ်တဲ့။ ဒီနှစ်မှာတော့ ဒီရွာလေးရဲ့ ကုမ္ပဏီဟာ ယူရို ၆.၅ ဘီလီယံအထိ ကြွယ်ဝချမ်းသာ ကြီးထွားလာဖို့ မျှော်လင့်ထားပါတယ်တဲ့။ ဒီလို ချမ်းသာဖို့ တစ်ခြားသောလုပ်ငန်းများဖြစ်တဲ့ ဆောက်လုပ်ရေး၊ ဆေးလိပ်ထုတ်လုပ်တဲ့ စက်ရုံ၊ စိုက်ပျိုးရေးနှင့် ခရီးသွားဝန်ဆောင်မှု့လုပ်ငန်းတွေကလည်း ၀င်ငွေတွေရရှိစေပါတယ်တဲ့။ အဲ့ဒီရွာလေးဟာ ရွာသားတွေကို ကား အခမဲ့ပေးပါတယ်။ နောက် ဥရောပအဆင့်မီ တည်ဆောက်ထားတဲ့ အိမ်ကြီးအိမ်ကောင်းတွေလည်း အခမဲ့ ပေးပါတယ်တဲ့။ ခလေးတွေအတွက် ပေးရတဲ့ ကျူရှင်ခကလွဲလို့ ကျန်တဲ့ ပညာရေးစရိတ်က အခမဲ့ပါ ဒါ့အပြင် ပြည်ပနိုင်ငံတွေကို ခရီးထွက်ချင်ရင်လည်း အခမဲ့ ခရီးထွက်လို့ရပါတယ်တဲ့။
Posted by Aung Htut at 10/10/2011 04:47:00 PM4comments
တရုတ်နိုင်ငံ ဟူပေ ပြည်နယ်၊ ၀ူဟန်း ဆင်ခြေဖုံး နားက ကျင်းလင်ရွားကလေးက ကျန်းဝူရိ ဆိုတဲ့ လယ်သမားဟာ တီထွင်မှု့ကို စိတ်ဝင်စားသူပါ။ အခုတော့ သူဟာ သူကိုယ်တိုင်ဖန်တီးထားတဲ့ ရေငုပ်သင်္ဘော အငယ်စားလေးကို အောင်မြင်စွာ စမ်းသပ်နိုင်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ဒီသင်္ဘောလေးကို “ရှောင်ဂေါင်းဟို” လို့ နာမည်ပေးထားပါသတဲ့။
၃.၆ မီတာရှည်ပြီး ၁.၈ မီတာစောက်နက်နဲ့ ဒီရေငုပ်သင်္ဘောဟာ မီတာ ၂၀ အနက်အထိ ရေငုပ်နိုင်ပြီး တစ်နာရီကို ၂၀ ကီလိုမီတာနှုန်းနဲ့ ၁၀နာရီလောက် ရေထဲမှာ သွားလာနိုင်ပါသတဲ့။ ရေငုပ်သင်္ဘောရဲ့ပုံစံကတော့ လင်းပိုင်နဲ့ ဆင်တူပါတယ်။
ကျန်းဝူရိ ကတော့ “ကျွန်တော် ဒီရေငုပ်သင်္ဘော ကိုရေတပ်မှအသုံးချရန် ရောင်းချဖို့ မျှော်လင့်ထားပါတယ်။ တစ်စီးကို ယွမ် ၁ သိန်းနဲ့ သင်္ဘောရဲ့ အန္တရာယ်ကင်းရှင်လုံခြုံရေး စစ်ဆေးမှု့တွေ ပြုလုပ်ပြီးတဲ့ အချိန်ကျရင် ရောင်းမှပါ။ ဒီလထဲမှာ ကုန်သည်တစ်ယောက်က ပထမဆုံး တစ်စီးကို ၀ယ်ဖို့ရှိပါတယ်” လို့ ဆိုသွားပါတယ်။
Posted by Aung Htut at 10/10/2011 12:07:00 PM7comments
Posted by Aung Htut at 10/09/2011 10:28:00 PM5comments
2007 ဘီလ်ဂိတ် နှင့် စတိဗ်ဂျော့ဘ်(စ်) တို့ ဆွေးနွေးခန်း
ကြာခဲ့ပါပြီ။ လွန်ခဲ့သော ၄ နှစ်ကျော်အချိန်ကာလက ကျွန်တော်တို့ အခု ဒီဘလော့ဂ်ကို ဒီလိုတင်၊ ဒီလိုဖတ်လို့ရလာအောင် ဒီကွန်ပျူတာဆိုတဲ့ စက်ကြီးကို ဖန်တီးခဲတဲ့ လူတွေထဲက ရှေးဦးတီထွင်သူကြီး ၂ ယောက်ရဲ့ ရှားရှားပါးပါး ဆွေးနွေးခန်းလေးကို ကြည့်ဖြစ်လို့ ထပ်ပြီးရှဲပေးလိုက်ပါတယ်။
အခန်း ၁ - သတင်းအချက်အလက်နှင့်နည်းပညာပေါ်မူတည်ပြီး သုံးသပ်ချက်များနှင့် သူတို့နှစ်ဦး၏ တစ်ဦးအပေါ်တစ်ဦး လေးစားမှု့များကို အပြန်အလှန် ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
Posted by Aung Htut at 10/09/2011 03:01:00 PM0comments
ဒီတစ်ခါတော့ စူပါဟီးရိုးများ အိုသွားသော် ဆိုတဲ့ ပိုစ့်မျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ စူပါဟီးရိုးဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ စူပါမင်းတို့၊ BATMAN တို့လို မကောင်းသူပယ် ကောင်းသူကယ်မည့် စွမ်းအားရှင်ကြီးများကို ပြေးမြင်ကြမှာပါ။ (စွမ်းအားရှင်ဆိုသည်မှာ Superhero ကို အဓိပ္ပာယ်ပြန်ဆိုပါသည်၊ မြန်မာနိုင်ငံမှ စွမ်းအားရှင်များကို မဆိုလို [စကားချပ်] )။
အခု ဟောဒီ ချက်နိုင်ငံက စူပါဟီးရိုးလက်သစ်ကတော့ ၀တ်စုံပြည့်ဝမ်းဆက်၊ မျက်နှာဖုံး နဲ့အတူ သူ့ရဲ့ ရုပ်သွင်ကို အများမမြင်ရလေအောင် စီမံထားပါသတဲ့။ သူဟာ ချက်နိုင်ငံ Prague (ပရက်(က်)) ပန်ခြံထဲမှာ ဆေးလိပ်သောက်သူတွေ့ရင် ရေနဲ့လောင်းပါတယ်၊ ခွေးမွေးပြီး ပန်းခြံထဲ လာခွေးကျောင်း ခွေးအီးအီးတွေ မကျုံးဘဲ ဒီတိုင်းထားခဲ့တဲ့ ခွေးသခင်တွေကို ခွေးအီးအီးနဲ့ သုတ်ပါသတဲ့။
“ကျွန်တော်တော့်နာမည်က စူပါ ဗက်လက်ဗ် ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ဟာ ဟော့ဒီ ကျွန်တော်တို့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ဒီလိုမျိုး မရိုးမသား တာဝန်မယူတဲ့ ဖြစ်ရပ်တွေကို အရေးယူသွားမှာပါ” လို့ သူ့ကိုယ်ပိုင် ၀ဘ်ဆိုဒ်မှာ ကြော်ငြာထားပါတယ်။
Posted by Aung Htut at 10/08/2011 07:53:00 PM3comments
Posted by Aung Htut at 10/08/2011 11:18:00 AM5comments
Posted by Aung Htut at 10/08/2011 09:24:00 AM 1 comments
ဇာတ်လမ်းလေးကတော့ ဒီလိုပါ - ပြီးခဲ့တဲ့ စနေနေ့တုန်းက နယူးယောက်မှာရှိတဲ့ စပါတန်ဘက် ဒေသဆိုင်ရာ ဆေးခန်း(Spartanburg Regional Medical Center) ကို လူတယောက် ကသောသမျောနဲ့ ၀င်လာပြီးတော့ သူ့ဒူးခေါင်းကို ကြောင်က သေနတ်နဲ့ ပစ်သွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ညနေပိုင်း ၇နာရီခွဲ အချိန်လောက်မှာ အပစ်ခံရတယ်လို့ဆိုပြီး သူ့ရဲ့ ဒူးက သေနတ်ဒဏ်ရာကို ကုသပေးဖို့ ပြောခဲ့တာပါ။ ဖြစ်ပုံကတော့ ကြောင်က .၃၂ ကယ်လီဘာ သေနတ်ပေါ်ကို ခုံတက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ သေနတ်က မောင်းပြုတ်သွားပြီး သူရဲ့ ဒူးကို နောက်ဖက်ကနေ အပစ်ခံရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။
“စုံစမ်းစစ်ဆေးသူတွေဟာ ထိုသူရဲ့ အိမ်ကို သွားရောက်စစ်ဆေးခဲ့ပြီးတော့ ရုန်းရင်ဆန်ခတ် ဖြစ်ပွားမှု့ မရှိခဲဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။ ဒီအတွက် ဘာအမှု့မှ လည်းမဖွင့်ခဲပါဘူးတဲ့”
သူ့အရပ်နဲ့ သူ့ဇတ်ကတော့ ဟုတ်နေတာပါဘဲ။
Ref : (Link)
Posted by Aung Htut at 10/07/2011 07:47:00 PM4comments
ဂျာမနီနိုင်ငံ ဟန်နိုဗာ မြို့က အသက် ၂၈ နှစ်ရှိ အန်ကီ ဒိုမက်စကီး လို့ခေါ်တဲ့ ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်နာလေးဟာ နို့ကနေပြီးတော့ ချည်မျှင်ထုတ်လုပ်တဲ့နည်းက တွေ့ရှိခဲ့ပါပြီ။ ဒီချည်မျှင်ကို QMilch (ကျူမိလ်ရှ်) လို့ နာမည်ပေးထားပါတယ်။ ဒီချည်မျှင်ဟာ နို့မှာအများအပြားပါတင်တဲ့ ပရိုတင်းတစ်မျိုးကနေ ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီချည်မြင်ဟာ ဓာတုဗေဒပစ္စည်းများ မပါဝင်ဘဲ သဘာဝကနေ ပထမဆုံးထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့ နို့ချည်မျှင်ဖြစ်ပါတယ်။
“ဒါချည်သားကို ကိုင်ကြည့်ရင် ပိုးသာလေးလိုဘဲ နူးညံပါတယ်၊ နောက်ပြီးတော့ အနံအသက်လည်း မရှိပါဘူး။ ဒါကို ကြိုက်သလိုလျှော်ဖွတ်လို့ရပါတယ်” လို့ ဒိုမက်စကီးက Reuters သတင်းဋ္ဌာနကို ပြောသွားပါတယ်။
သဘာဝ ပစ္စည်းစစ်စစ်ကနေ ထုတ်လုပ်ထားတာမို့လို့ ဒီ QMilch ချည်မျှင်ဟာ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ သဟဇာတဖြစ်စေပြီး ကျန်းမာရေးအတွက် ကောင်းကျိုးများစွာ ရှိစေတယ်လို့ ဒိုမက်စကီးက ဆိုပါတယ်။ ဒီချည်မျှင်ထဲမှာ အမိုင်နိုအက်ဆစ်ပါဝင်လို့ ဘက်တီးရီယားတွေကနေ ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်၊ ဒါ့အပြင် ဒီချည်မျှင်နဲ့ ရက်လုပ်ထားတဲ့ အင်္ကျီတွေကို ၀တ်ဆင်မယ်ဆိုရင် အိုမင်းရင်းရော်ခြင်းမှလည်း ကာကွယ်နိုင်စေပါသတဲ့။ နောက်တစ်ခုကတော့ သွေးလှည့်ပတ်မှု့ကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေပြီး ခန္စာကိုယ်ရဲ့ အပူချိန်ကိုလည်း ထိန်းညှိပေးနိုင်ပါစေတယ်တဲ့။
Posted by Aung Htut at 10/07/2011 12:31:00 PM6comments
Apple ကတောင် iPhone5မထုတ်ဖြစ်သေးဘူး တရုတ်မှာတော့ iPhone5အတုတွေ ၀ယ်လို့ရနေပါပြီ။ လူပေါင်း သန်း ၃၅၀လောက် Register လုပ်ထားတဲ့ Taobao.com လိုမျိုး နာမည်ကြီး ရောင်းဝယ်ရေးတရုတ် ၀ဘ်ဆိုဒ်တွေမှာ iPhone5အတုတစ်လုံးကို ယွမ် ၂၀၀ (အမေရိကန် ၃၁ ဒေါ်လာ)လောက်နဲ့ ၀ယ်လို့ရနေပါပြီ။
ပြီးခဲ့တဲ့ အင်္ဂါနေ့တုန်းက Apple က အများမျှော်လင့်သလို iPhone5ထွက်မလာဘဲ iPhone 4s သာထွက်လာခဲ့ပေမယ့် ၀ယ်ယူသူတွေကတော့ အဆိုပါဝဘ်ဆိုဒ်မှာ သူတို့အမြင်လေးတွေကို အခုလိုရေးသွားပါတယ်
“အရမ်းကောင်ပါတယ်၊ ကျွန်တော် ၄၊ ၅ ရက်လောက်သုံးကြည့်ပြီးပြီ ၀ယ်ရတာ တန်ပါတယ်” လို့ Taoboa ၀ဘ်ဆိုဒ်ကနေ iPhone5၀ယ်သူတစ်ယောက်က ရေးသွားပါတယ်။ တစ်ချို့ စမတ်ဖုန်းတွေကိုတော့ အတုပြုလုပ်တယ်လို့ စွပ်စွဲခံရမယ့်အရေး ရှောင်ရှားတဲ့အနေနဲ့ “HiPhone 5” လို့ တပ်ထားပေမယ့် ဖုန်းရဲ့ အနောက်မှာတော့ Apple ရဲ့တံဆိပ်ကို ယူသုံးထားပြီး “iPhone 5G”လို့ ဘက်ထရီထည့်တဲ့နေရာမှာ တံဆိပ်ရိုက်ထားပါသတဲ့။
Posted by Aung Htut at 10/06/2011 09:01:00 PM2comments
ကွန်ပျူတာလောက၊ အိုင်တီလောက ရဲ့ ရှေ့ဆောင်လမ်းပြ Steve Jobs ဟာ အောက်တိုဘာ ၆ ရက်နေ့ကသူနှစ်ရှည်လများ ခံစားခဲ့ရတဲ့ ပန်ကရိယ ကင်ဆာရောဂါနဲ့ ကွယ်လွန်သွားပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ သူသေဆုံးသွားတဲ့နေ့မှာ ကမ္ဘာအရပ်ရပ်က လူတွေရဲ့ ၀မ်းနည်းကြောင်း စာလေးတွေကို ဖော်ပြရင်း i မျိုးဆက်ရဲ့ ဖခင်ကြီးကို ဂုဏ်ပြုလိုက်ပါတယ်။
Posted by Aung Htut at 10/06/2011 03:52:00 PM2comments
At.mosphere စားသောက်ဆိုင်ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ အောက်တိုဘာ ၄ ရက်နေ့က ကမ္ဘာ့အမြင့်ဆုံး စားသောက်ဆိုင်အဖြစ် ဂင်းနစ်မှတ်တမ်းဝင် အမှတ်တရ တံဆိပ်ကို လက်ခံရရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒီစားသောက်ဆိုင်ဟာ ဒူဘိုင်းနိုင်ငံရဲ့ အမြင့်ဆုံး Burj Khalifa (ကမ္ဘာ့အမြင့်ဆုံး အဆောက်အဦး) ရဲ့ ၁၂၂ ထပ်မှာ ရှိတာပါ။ မြေပြင်ကနေဆိုရင်တော့ ၄၄၂ မီတာ အမြင့်မှာ ရှိပါတယ်။
ဒီစားသောက်ဆိုင်မှာ စားသောက်ရင် အာရဘီယံ ပင်လယ်ကွေ့ရဲ့ အလှအပတွေကို အပေါ်စီးက မြင်တွေ့ခံစားနိုင်မှာပါ။
Posted by Aung Htut at 10/06/2011 12:09:00 PM3comments
ချီလီနိုင်ငံကတော့ အရင်တစ်ခေါက် မိုင်းတွင်းပြိုကတုံးက လူ ၃၃ ယောက်ကို ကယ်ဆယ်နိုင်ခဲ့လို့ ကမ္ဘာကျော်ခဲ့ပါတယ်။ အခုတစ်ခါကတော့ မိုင်းတွင်းပြိုကျတာမဟုတ်ပါဘူး။ နွားသိုးကြီးတစ်ကောင်ကို ရေမြောင်းထဲကနေ ခက်ခက်ခဲခဲ ကယ်ဆယ်ခဲ့ရတာပါ။
စတော်ဘယ်ရီ လို့ ခေါ်တဲ့ နွားသိုးဟာ စန်တီယာဂို မြို့ ဆင်ခြေဖုံးရှိ ရေဆိုးထုတ်တဲ့တူးမြောင်း အဖုံးပွင့်နေတဲ့ အထဲကို ပြုတ်ကျသွားခဲ့ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ အောက်တိုဘာ ၄ ရက်နေ့တုန်းက ဒီနွားကြီးကို ကယ်တင်ဖို့ ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေဟာ မြောင်းရဲ့ ကွန်ကရစ် အဖုံးကို ဖယ်ရှား၊ ပြီးတော့မှ ၀န်ချီစက်တွေနဲ့ ဒီနွားသိုးကြီးကို မထုတ်ခဲ့ရပါတယ်။
Posted by Aung Htut at 10/06/2011 12:07:00 AM 1 comments
အကုန်လုံးကိုသိတယ်၊ ဒါပေမယ့် သိထားတာတွေက အလုပ်မဖြစ်ဘူး အဲ့ဒါကို သီအိုရီလို့ခေါ်တယ်။
အကုန်လုံးက အလုပ်မဖြစ်ဘူး ဒါပေမယ့် ဘာကြောင့် အလုပ်မဖြစ်လဲဆိုတာကို အားလုံးက သိတယ်၊ အဲ့ဒါကို အဖွဲအစည်းလို့ခေါ်တယ်။
အကုန်လုံးတော့ အလုပ်ဖြစ်တယ် ဒါပေမယ့် ဘာကြောင့်အလုပ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကို ဘယ်သူမှ မသိဘူး။ အဲ့ဒါကို လက်တွေ့လုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်။
Posted by Aung Htut at 10/05/2011 12:13:00 PM 8 comments
ဒါတွေကို ဖယ်လိုက်လည်း မင်းကိုငါ ချစ်ခဲ့တယ်…
မင်းကို ဖန်ဆင်းခဲ့တယ်ဆိုရင် ဖန်ဆင်းရှင်ကို ငါ ကျေးဇူးတင်တယ်….
ဒါဝင်သီအိုရီအရဆိုရင် မင်းရဲ့ ဘိုးဘေး မျောက်တွေကို ကျေးဇူးတင်တယ်….
ငါ့ကို ချစ်ခဲတဲ့ အတွက်လည်း ငါမင်းကို ကျေးဇူးတင်တယ်……
Posted by Aung Htut at 10/04/2011 07:24:00 PM7comments
နယူးယောက်မြို့က လူတစ်ယောက်ဟာ သူ ပင်စင်ယူတော့ တစ်သက်လုံး စုထားတဲ့ ငွေလေးနဲ့ ပေါ်တူဂီနိုင်ငံက မြေနဲ့ အိမ်ကို ၀ယ်ယူခဲ့ပါသတဲ့။ ဒီခြံနဲ့ မြေဟာ အရင်အိမ်ပိုင်ရှင်တွေ သေလွန်ပြီး လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၅ နှစ်ကထည်းက ၀ယ်ယူသူမရှိဘဲ ဒီတိုင်းပစ်ထားတဲ့ ခြံနဲ့ မြေပါ။ အဲဒီအိမ်ကြီးထဲမှာ စပါးကျီကြီး တစ်ခုလည်းရှိပါတယ်။
Posted by Aung Htut at 10/04/2011 12:03:00 PM5comments
ပုံမှန် သင်္ဘောတွေနှင့်မတူ တစ်မူထူးခြားတဲ့ ဟောဒီ ဒီဇိုင်းကို မိုနာကို လှေပြပွဲမှာ တင်ဆက်သွားပါတယ်။ ဒီဟာလေးကို ဂျိမ်း(စ်)ဘွန်း ဇတ်ကားထဲကနေ စိတ်ကူးရပြီးတော့ ဗြိတိန်ကုမ္မဏီတွေဖြစ်တဲ့ “Yatch Island Design” နှင့် “BMT Nigel Gee” တို့က ပူးပေါင်း ဖော်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။ ခုလောလောဆယ်တော့ Concept Design Stage အဆင့်မှာဘဲရှိသေးပြီး ဒီအဆောက်အဦးရဲ့ အချင်းကတော့ ၃၂၈ ပေ (၁၀၀မီတာ)ရှိပါတယ်။ ဒါဟာ အပျော်စီး သင်္ဘောတွေရဲ့ ထုထည်နဲ့ တူညီပါတယ်။
BMT Nigel Gee ရဲ့ Yatch Design Director ဂျိမ်စ်ရွိုင်းရဲ့ အဆိုအရတော့ “Utopa ဆိုတာက ခရီးသွားဖို့အတွက်မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါဟာ ကျွန်းငယ်လေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို ကျွန်းငယ်လေးကို ဖန်တီးချင်သူတွေ အတွက်ပေါ့”
Posted by Aung Htut at 10/04/2011 07:59:00 AM2comments
ပြီးခဲ့တဲ့ ကြာသာပတေးနေ့က တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံဟာ National Day ခါတော်မီ ထျန်းကုန်း - ၁ (တရုတ်လို အဓိပ္ပာယ်ကတော့ ကောင်းကင်ဘုံက နန်းတော် လို့ အဓိပ္ပာယ်ထွက်ပါတယ်) အာကာသကို လွှတ်တင်ပါတယ်။ ဒီဟာကြီးကို တစ်ရုတ်နိုင်ငံ အနောက်မြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ Jiuquan Satellite Launch Centre (JSLC) ကနေ လွှတ်တင်ခဲ့တာပါ။ ဒါကြီးကို လွှတ်တင်ရခြင်းရဲ့ အဓိက ရည်ရွယ်ချက် ၂ ခုကတော့ ကမ္ဘာပတ် အာကသစခန်းအဖြစ် စမ်းသပ်လိုတာရယ်၊ နောက်တစ်ခုကတော့ အာကာသဆိုင်ရာ စူးစမ်းလေ့လာ ဖို့ဖြစ်ပါသတဲ့။
Posted by Aung Htut at 10/03/2011 09:13:00 PM2comments
အသက် ၄၆ နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ ကလေး ၃ ယောက်အဖေဟာ သူရဲ့ကွန်ပျူတာ ဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ “Call of Duty : Black Ops” ထဲက ဇာတ်ကောင် အသတ်ခံရလို့ သူ့ဇတ်ကောင်ကို သတ်သွားတဲ့ ဆယ်ကျော်သက်လေးကို သွားပြီး ရန်ရှာလို့ တရားစွဲခံထားရပါတယ်။
အင်္ဂလန် နိုင်ငံ ပလိုင်းမောင့် မှာ နေထိုင် မာ့ခ် ဘရက်ဖို့ဒ် ရဲ့ ကွန်ပျူတာဂိမ်းဇတ်ကောင်ဟာ အသတ်ခံရပါတယ်တဲ့။ ဒီထက်ဆိုးတာက သူ့ဇာတ်ကောင်ကို သတ်သွားတဲ့သူက အသက် ၁၃ နှစ်အရွယ် ချာတိတ်လေးတစ်ယောက်ဖြစ်နေခြင်းပါ။ သူတို့ အင်တာနက်ကနေတစ်ဆင့် ကစားခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီး အဲ့ဒီအချိန်မှာ မိုက်ခရိုဖုန်းကတစ်ဆင့် စကားလည်းပြောကြပါတယ်တဲ့။ မာ့ခ်ဟာ ကောင်လေးနေတဲ့နေရာကိုလည်း သိပါသတဲ့။
Posted by Aung Htut at 10/03/2011 12:52:00 PM 10 comments
မြစ်ဆုံ တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းခွင် ဗီဒီယိုလေးပါ... YouTube မှာ "yemintun1988" ဆိုသူတင်ထားတာတွေ့လို့ ထပ်မံ Share လိုက်ပါသည်။
Posted by Aung Htut at 10/03/2011 01:08:00 AM0comments
Link 1 : A Briefing including Daw Aung San Su Kyi's "Irrawaddy Appeal"
Link2: Overview and news of Myitsone Dam
Link3: Environmental Impact Assessment 2010 March by Changjiang Survey, Planning and Research Limited Co.
Posted by Aung Htut at 10/02/2011 09:51:00 PM0comments
ပြီးခဲတဲ့ စနေနေ့က မြန်မာနိုင်ငံတော် သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန်မှ ပြည်သူတို့၏အများဆန္ဒအပေါ်မူတည်ပြီး လက်ရှိ တရုပ်ပြည်သူ့သမ္မတ နိုင်ငံနှင့် ပူးတွဲ ဖော်ဆောင်နေသော မြစ်ဆုံရေအားလျှပ်စီမံကိန်းအား မိမိတို့ အစိုးရလက်ထက်တွင် ရပ်ဆိုင်းထားမည်ဟု လွှတ်တော်ကို သ၀ဏ်လွှာ ပေးပို့ခြင်းအတွက် တရုတ်ပြည်မှ ပြောဆိုဆွေးနွေးရန် ခေါ်ယူသည်ဟု Routers သတင်းဋ္ဌာနမှ ဖော်ပြပါရှိပါတယ်။
တရုတ် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး အဆိုအရ “သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းနိုင်ငံများဟာ တရုတ် ကုမ္ပဏီတွေရဲ့ တရားဝင် နှင့် တရားဝင်ခြင်းနှင့်ဆိုင်ရာ အခွင့်အရေးတွေ အာမခံချက်ထားသင့်တယ်” လို့ဆိုသွားပါတယ်။
“မြစ်ဆုံရေကာတာဟာ တရုတ်နှင့် မြန်မာ ပူးပေါင်းဖော်ဆောင်တဲ့ ပရောဂျက်တစ်ခုဖြစ်ပြီး နှစ်ဖက်စလုံးမှ ထဲထဲဝင်ဝင် လေ့လာသုံးသပ်ပြီးတော့မှ လုပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်” လို့ တရုတ်အစိုးရပိုင် ၀ဘ်ဆိုဒ် တစ်ခုဖြစ်သော (www.mfa.gov.cn) မှ ပြောရေးဆိုခွင့်ရ ဟုန်လိုင်း ဆိုသူကပြောဆိုသွားပါတယ်။
Posted by Aung Htut at 10/02/2011 12:39:00 PM2comments
ဒါကတော့ တစ်ရုတ်နိုင်ငံ စီချွမ်ပြည်နယ်မှာရှိ ချန်ဒူးမြို့က ပန်ဒါစောင့်ရှောက်ရေး ဂေဟာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဂေဟာမှာ ယခုတွေ့မြင်ရတဲ့ ပုံအတိုင်း ကမ္ဘာ့မျိုးတုန်းပျောက်ကွယ်လုနီးပါး အန္တရာယ်ကို ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ ပန်ဒါဝက်ဝံကလေးတွေကို အနီးကပ် ပြုစုစောင့်ရှောက်ပေးနေကြပါတယ်။
ဒီနေရာလေးဟာ တရုတ်ပြည်ရဲ့ ပန်ဒါဝက်ဝံ မျိုးဆက် ပျောက်ကွယ်မသွားရအောင်၊ ဆက်လက်ပြန့်ပွားရေးအတွက် သုသေသန ရှာဖွေဆောင်ရွက်မှု့တွေကို အဓိက လုပ်ဆောင်နေတဲ့ နေရာလေးလည်းဖြစ်ပါတယ်။
တရုတ်နိုင်ငံဟာ လည်းကောင်းတို့ နိုင်ငံရှိ တောနက်တွေထဲမှာ နေထိုင်ကျက်စားနေတဲ့ ပန်ဒါအရေအတွက်ကို စစ်တမ်းကောက်ယူနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါလို စစ်တမ်းကောက်ယူခဲ့တာဟာ ၁၀ စုနှစ်ပေါင်းအတော်ကြာ ကထည်းက ကောက်ယူခဲ့တာဖြစ်ပြီး ပထမဆုံး စစ်တမ်းကိုတော့ ၁၉၇၀ ၀န်းကျင်မှာ ထုတ်ပြန်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
Posted by Aung Htut at 10/02/2011 08:50:00 AM4comments
ကင်းဆိုတာ ကင်းမလက်မဲ မဟုတ်ဘူး
အော်တိုရန်းနဲ့ နှစ်ဆ “ဒေါင်း” တော့ ကျုပ်က နောက်ဆုံးတက်ခဲ့တာ…..
ဟောလီးဝုဒ်မှာ တစ်ဘက်လူ သွေးထွက်အောင် ကင်းနှစ်ကောင်ညှပ်ပြီး “ဥ” ခဲ့တာက ကျုပ်
အပယ်ချင်းယှဉ်ရင်တောင် ကျုပ်ကြောင့် စားခဲ့ရတဲ့ “ရှိုး”
တစ် နဲ့ကိုး ပြီးမှ ကျုပ်တက်ခဲ့ရတာကိုများ ဗီလိန်လို့ သမုတ်သတဲ့လား
ခင်ဗျားတို့ ကိုးခံနဲ့ ကျုပ်ကို ပွတ်ပြီး ပေါက်ခဲ့တဲ့ “ရှမ်း”ပွဲကိုကျတော့ ဘာပြောဦးမလဲ…
ငါးချပ်ဝိုင်းမှာ ကျုပ်ကြောင့် “ဘူ” ခဲ့ရတာ ခင်ဗျားတို့…
ဟိုကောင် “တစ်” နောက်ကို ကောက်ကောက်ပါအောင်လိုက်သွားတဲ့
၂၁ ဆိုတဲ့ တစ်ချိန်တုန်းကပေါ့
by AH (၁၊ အောက်တိုဘာ၊ ၂၀၁၁။ ၁၅:၄၂)
Posted by Aung Htut at 10/01/2011 11:26:00 PM2comments
Bell Nuntita ဆိုတာ ထိုင်းနိုင်ငံက သူလေးပေါ့။ သူ့ကိုမွေးတော့ ၁၉၈၃ ဒီဇင်ဘာ ၂၀ မှာပါ။ သူဟာ အဆိုတော်လည်း ဖြစ်သလို ဖျော်ဖြေရေးအစီအစဉ် တင်ဆက်မှု့နဲ့ ရေဒီယို ဒီဂျေ လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၁၁ မတ်လ ၁၃ ရက်နေ့က ကျင်းပခဲတဲ့ Thailand’s Got Talent ကနေစပြီးတော့ ထင်ရှားကျော်ကြားလာခဲ့တာပါ။
Posted by Aung Htut at 10/01/2011 01:11:00 PM2comments
ကမ္ဘာ့ အံဖွယ်အဆောက်အဦးတွေကို သဲနှင့်ပြန်လည်တည်ဆောက်...
လုပ်ငန်းခွင်အတွက် ယုံကြည်မှု့ရှိအောင် တည်ဆောက်ခြင်း...
စားကြဦးမလား ၃၃၈ ပေါင်လေးတဲ့ ဒေါ်လာ ၂၀၀၀ တန် ဟမ်ဘာဂါ...
ကမ္ဘာအရပ်ရပ်မှ စစ်သမီးများ သို့ အမျိုးသမီးစစ်သည်မျာ...
Anyway, Siri Can't Understand Singlish... Ha Ha ha...
ကြောင်က သေနတ်နဲ့ ပစ်လိုက်လို့ ဆေးရုံရောက်သွားတဲ့ သ...
မြစ်ဆုံအကြောင်း နည်းနည်းလေး ပိုသိချင်ရင် ဒါလေးဖတ်ပ...